လေဆာပရင်တာ Xerox DocuPrint P8ex အတွက် Xerox DocuPrint P8ex Driver အတွက် driver ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပြုထားသော driver သည် 32-bit Windows XP / 2000 operating system များနှင့်တရား ၀ င်သည်။ အရွယ်အစား…
asus rt-n12 d1 router ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် Rostelecom မှ iptv ဘယ်လိုပြောမလဲ။ PPPoE connection အတွက် Asus RT-N12 D1 ကို configure လုပ်ဖို့ WAN connection type list ထဲကသင့်တော်တဲ့ item ကို select လုပ်ပါ။ Enable box များကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ ...
ဒဏ်ရာရသည့်အရာတစ်ခုကိုပြန်လည်ဖြည့်ထားသည်။ သို့သော်ဆေးသုတ်။ မရဟုသူတို့ပြောကြသည်။ အကူအညီ .. ပရင်တာ -Canon PIXMA MG3640 အားလုံး inkjet Canon မှင်တန်ချိန်အားလုံးတူညီသည်ပြန်လည်သတ်မှတ်သည် - အဝါရောင်ခလုတ်ကို ၆ မှ ၁၀ စက္ကန့်ဖိထားပါ။
မှင်အစားထိုး။ EPSON L210 ပရင်တာ L210 ပရင်တာသို့မူရင်းမဟုတ်သောမှင်များကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာထည့်သွင်းရမည်နည်း။ အူရီဒူးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမှင်များဖြင့်မကစားပါနှင့်၊ ထိုအခါပရင်တာပျံပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
EPSON L120 အနှီးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း (သို့) အလုပ်လုပ်သောကောင်တာကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေပါသည်။ စီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် link သည်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကိုအနှီး epson l120 ကိုပြန်လည်စတင်ရန်အလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပေးပါ။
ကူညီပါ! ဒီခေါင်းစဉ်မှာတကယ်မကောင်းဘူး! MLT-D111s အရာတစ်ခုအတွက်ဘယ် toner ကိုသုံးသင့်သလဲ။ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို Samsung toner - 1210, 1710, 4100 toner Xerox 3117, P8ex ... One "but" ။ သင့်ရဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာ ...
မင်တာ၊ လေဆာနှင့်အခြားအရာတစ်ခုပေါ် မူတည်၍ ပရင်တာသည့်အရာတစ်ခုမည်မျှကုန်ကျသည်။ ရူဘယ် ၂၀၀ မှ ၉၀၀ အထိရှိပြီးမင်းသားတစ်ယောက်၏ကြမ်းပြင်အတွက်စနစ်တစ်ခုဝယ်ယူခဲ့သည်။
plotter ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာအတွက်လဲ။ PL # 152; OTTER (plotter)၊ plotter၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ကားချပ်များ၊ ပထမ ဦး ဆုံးပေါ်ထွက်လာသောနှင့်အစဉ်အလာကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်ကလောင်ကြံစည်ကြသည်။ ...
ce283a အရာတစ်ခုအတွက်ဘယ် toner ကအကောင်းဆုံးလဲ။ Bulat ။ ရလဒ်ကတော့ကောင်းတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာလိုက်ဖက်ညီမှုမရှိတာပိုကောင်းပေမယ့်ထူထဲတဲ့သံလိုက် rollerala 12A နဲ့သာဆိုလျှင် "starter" cartridges (အပြည့်အဝ) ကိုပြောနေမယ်ဆိုရင်။
HP LaserJet Pro MFP M125-M126 PCLmS ကိုမည်သို့စကင်ဖတ်ရမည်နည်း။ ဘယ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုသင်အသုံးပြုသလဲ။ ထင်းမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီးကြောင်းသေချာပါစေ ABBYY FineReader 10 လမ်းညွှန်ကိုပြုပြင်ခြင်း - HP Scan Software ဖြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။
ဒီနာရီဟာရေစိုခံတယ်လို့ယုံကြည်ရမလား။ OMAX ကိုစောင့်ကြည့်ပါ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့ခေတ်မြစ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ကောင်းပြီဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘူး ထိုသူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိသေး၏။ သင်နာရီတစ်လုံး ၀ ယ်လျှင်၊
ချက်ချင်းဆိုသလို hp deskjet 123 mfp မှအမှတ်အသား ၁၂၃ အနက်ရောင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုကိုပရင်တာနှင့်ပြန်လည်ဖြည့်ပြီးနောက်စာရွက်သည်နီးကပ်လာသည်။ ဟုတ်ကဲ့, ရေနွေးငွေ့မီးစက်သန့်စင်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်။ ဤကဲ့သို့သောအရာဥပမာ - http: //service-kartridge.rf/instrukcii/instrukciya-po-zapravke-strujnyx-kartridzhej-hp-2130.html အကယ်၍ software သည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်လျှင် ...
အဆိုပါအရာတစ်ခုကိုပြန်လည်ဖြည့်ပြီးနောက် hp deskjet 123 mfp မှစတားနံပါတ် 2130 ပြန်လည်စတင်ဖို့ဘယ်လို, ကအချည်းနှီးရေးသားခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်မထားဘူး။ HP ပရင်တာမှင်မင်ကုန်သည့်အခါပုံနှိပ်ခြင်းကိုပိတ်ဆို့မထားပါ။ ပရင်တာအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်
ပုံနှိပ်အမှား။ ဤနေရာတွင်အကြံပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ driverplus.ru ကို သုံး၍ ပရင်တာရှိ USB ဘုတ်သည်အမှိုက်ဖြစ်သည်၊ ဤပုံစံအတွက်ပုံမှန်ပြtroubleနာဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာပဲပြောင်းလဲသွားတယ်။ HP ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ ...
tricolor, အမှား0သာသူတို့အား။ support သည် channel အားလုံးကိုမပြဘူး - error 0. ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ။ - ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်သည်အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လခပေးသောထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ပါ။
ပျမ်းမျှ A4 စက္ကူတစ်လုံးဘယ်လောက်ကျသလဲ။ ရိုးရိုးစည်ကားနေတဲ့စက္ကူကဘယ်လောက်ကျပြီးအနိမ့်ဆုံးကဘယ်လောက်လဲ။ ဘယ်လောက်စာရွက်များနှင့်စက္ကူအမျိုးအစားကိုဤအဖြေတွေကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုနိုင် ... ပေါ်မူတည်။
ပရင်တာကစက္ကူကောက်နေတာကိုရပ်လိုက်တယ်။ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ။ အဆိုပါရွေးသို့မဟုတ်အစာကျွေးခြင်း roller အစားထိုးလိုက်ပါ။ သူတို့ပင်ထို့ကြောင့်ဖမ်းယူကြဘူး။ သာမာန် roller များသည်သူတို့၏နံရံတွင်နံရိုးများရှိပြီးဝတ်ဆင်ထားသောသူများတွင်ချောမွေ့သောပုံစံရှိသည်။
Windows 10 မျှဝေထားသောပရင်တာသည် Windows xp နှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။ ဘယ်သူပြီးသားပြီနည်း တရား ၀ င်မ ၀ င်ပါ။ )) SMBv10 အထောက်အပံ့ကို 1k တွင်ဖယ်ရှားသည်။ XP ကိုအနိုင်ယူပါ။
Tricolor တီဗီလိုင်းအချို့ကိုအဘယ်ကြောင့်မပြရသနည်း။ ဒါကြောင့်သတိပြုပါ Scrambled DRE channel ဒီအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်တယ် - ၎င်းကိုဖွင့်သည့်အခါလက်ခံသူ၏ banal hang သည်ဖြုတ်ထားရမည်။
အဓိကအရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားပါသလား အီတလီစာရေးကိရိယာ stapler Primula 6, အမှတ်အမှတ် 10 သူ့အဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ဘာလုပ်ရမှန်း? များသောအားဖြင့်၎င်းကိုနံပါတ်ပြားသို့မဟုတ်ထုပ်ထားသည့်စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးသားထားသည်။
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,788 စက္ကန့်ကျော် Generate ။